Natural Fomba mahafotsy Teeth Easy | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Natural Fomba mahafotsy Teeth Easy
Raha izay no tianao voajanahary fomba mahafotsy nifytsy mividy fitaovana lafo vidy rehetra, fotsiny hiverina olden fotoana. Mampiasa fanafody an-trano i Bebe sy i Neny fa efa fantatrao angamba. Raha misy ache, fanaintainana, Hetezo, na ny zavatra hafa, misy foana dia vahaolana na fanafody miafina ao amin'ny cupboard any ho any. Toy izany koa ny nify Whitening. Diniho voajanahary fomba mahafotsy nify eto ambany ary ho gaga ny vokatra ampiasaina ireo.
Raha tia frezy ary mazava ho azy dia tsy mahazaka izany, hanao ny sasany shortcake frezy sy mahafotsy ny nify tamin'izany andro izany. Frezy dia voajanahary fomba mahafotsy nify. Nanapaka fotsiny lehibe iray eo amin'ny tapany frezy sy ny toerana ao am-bavanao. Ataovy azo antoka ny ao anaty ao an vava. Hahosotrao rehetra ranom Yummy frezy sy ny frezy manerana ny nify izy rehetra mandra rakotra in mavokely. Andraso tsara folo minitra ary avy eo mampiasa ny toothpaste. Ny toothpaste Mazava ho azy fa tokony ho ara-boajanahary rehetra ary tsy abrasives na ratsy hafa vokatry. Arakaraka ny fomba fotsy tianao, manao izany indroa isan'andro rehefa miborosy indroa isan'andro. Manàna faharetana, isan'andro dia ho hitanao ho azy fotsy nify. Izany koa dia manampy amin'ny kafe stains sy ny zavatra hafa mba hampihenana ny stains amin'ny nify.
Mety efa nandre ny fanaova soda noho ny nify. Raha tsy nanao izany ianao, dia be, tena tanora. Na iza na iza ny efa-polo ny dimam-polo taona no mahalala Neny, na Bebe fa mofo soda dia voajanahary fomba mahafotsy nify amin'ny alalan'ny fanilihana fotsiny ny nify. Eny, angamba toothpaste nampiasaina. saingy, Raha nanana ray aman-dreny be taona taranaka, fanaova soda foana ao amin'ny lisitra. Eny izany no tena miasa ary tsy Marokoroko. Kanefa mampiasa ny tao an-tanàna, rehefa fanilihana ny nifiny tahaka izany dia voajanahary fomba mahafotsy nify. Mahazo ny borosy nify fotsiny mando ka hanatsoboka izany ao amin'ny fanaova soda. Rehefa avy fanilihana mba hanala ny tsiro, mampiasa vava rehetra voa-Janahary Mandroa, fa madio minty fahatsapana. ankehitriny, ianao vao nianatra iray efa antitra lany voajanahary fomba mahafotsy nifyao an-trano.
Isika rehetra dia mampiasa vinaingitra mba hanadio amin'ny. Ny fanadiovana anao hividy vokatra manana vinaingitra ao aminy any ho any, raha tena voajanahary. Na izany na tsy, voajanahary fomba mahafotsy nify amin'ny an-trano, mampiasa ihany vinaingitra fotsy, ary ny antsasaky ny kapoaka. Koa hametraka momba ny tablespoon ny sira raha tianao. Ny sira dia manampy hanenjanana kokoa ny ny ramy izay mora sy nandeha ra. Izy io dia voajanahary vahaolana mba hanampy. Alohan'ny handeha hatory amin'ny alina, mampiasa azy fotsiny tahaka ny miborosy nify sy hosasany tsara. Ny nify ho lasa matanjaka kokoa sy mampiseho tsara tarehy tsiky.
Raha tena misy kamo sy mianatra ireo fomba rehetra ny fomba mahafotsy nify ao an-trano toa sarotra loatra, mampiasa fotsiny mint toothpaste. Ampiasao izany ho roa farafahakeliny in-telo isan'andro. Ny nify dia antoka ho volon'ny tena haingana. Afaka koa Surf ny aterineto mba hanangona fanazavana fanampiny momba ny hevitra mikasika ny voajanahary fomba mahafotsy nify.
Sokajy: Mahafotsy Teeth Tips Tags: voajanahary fomba mahafotsy nify, frezy, toothpaste, mahafotsy nify